महिला बिनानै किन सुहायो नेकपालाई त्यो मञ्च ?
महिलाहरूमा दास बन्ने प्रबृती किन दोहोरिदैछ ?
बैशाख १०, २०७६ सारङ्गी न्यूज
एक जना कामरेडलाई,कामरेड आज डबल नेकपाको मंन्चमा एक जना महिला कामरेड पनि देखिएन किन ? भनेर सोध्दा । यति ठुलो पार्टीमा पनि महिला मात्र खोजेर बसेर हुन्छ ? कामरेड ।महिलाले महिला मात्र खोज्ने ? ७७ जिल्लामा ३ त दिएकै छ त अब पहिले त्यतिमा काम गरेर देखाउनु पर्यो नि । त्यस्तो भन्ने हो भने तपाईनै भन्नुस कसरी सबैलाई भाग पुर्याउनु हुन्छ ? तपाई जहिले महिला महिला भन्नुहुन्छ, माओवादी छोडेपछि पनि तपाईमा यो रोग हटेको छैन ? यो रोग हटाउन पर्यो नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्यो भन्दै उल्टो रोगको संज्ञा दिदै ,रोग हटाउने सल्लाह पो दिनुभो ।
नयाँ भनेको के ? महिला बिनाको संगठन ? घरमा अनिवार्य बनेकी आमा बाहिरी राजनैतिक संगठनमा हुनुपर्दैन ? नेताको पुजा गर्ने अनि नेताले तथास्तु गरिदिने हो ? जे दिन्छन भगवानले दिन्छन भन्ने हो ? होईन भने किन यो देखिदैछ ? हिजोको लडाई आन्दोलन के का लागि थियो ? २/४ जना सत्तामा पुगेपछि बाँकी सबै माथि शासन गर्ने हो ? दुई तिहाई कम्युनिस्ट भनिने शाषनमा पनि परिवर्तनका लागी बैचारीक क्रान्ति शून्य र प्रतिक्रान्ती पटक पटक देहेरिने खतरा भैरहेछ । यो पार्टी नभएर एउटा गुट मात्र हो ।त्यसको बाबजुत यो शाषनमा अझै पनि ,अन्धभक्त बन्ने सपथ खाँदै बेजोडले ताली पिट्ने मात्र हुदैछ । दलाल पूँजीवादले क्रान्तिकारी महिलाहरू लाई पनि उपभोगको बस्तु बनाउदै क्रान्तिकारी आबाज बाहीर आउने नदिने बनाउदै छ । यो कुरामा किन महिला आँफै सजग देखिदैनन ? महिलाहरूमा दास बन्ने प्रबृती किन दोहोरिदैछ ?
महिलाको सबाल हरेक समाजको आन्दोलनमा सहभागिता मुलक मात्र होईन अनिवार्य नै हो । तर यहाँ अनिवार्यता त कहाँ कहाँ सहभागिता सम्ममा पनि महिलाहरू परेनन । सहभागीतामा पनि पार्टीहरूले निर्णय गरेको र घोषणापत्रमा भएको ३३% अनिवार्य हुनुपर्थ्यो । तर यो पूर्व माओवादीले आफैले उठाएको एजेण्डा आफ्नै पार्टीमा पनि कहिले लागु गर्न खोजेन ।किनकी नेकपा दक्षिणपन्थी फाँसिबादी शैली तिर राम्रै गरि जाँदैछ ।त्यसैले बर्गीय मुद्दा धाराशाही बन्दैछ । महिला सहभागिता पनि घट्दो स्तरमा जाँदैछ ।
लेखक राजेश्वरी सुवेदी
पुरूष मित्रहरूलाई केहि देखाउने पात्र, महिला सहभागिता बाहेक मुक्तीको प्रश्नले महिलालाई जति पक्कै सताउदैन । तर पदमा परेका अनि लड्न सक्ने महिलाहरूलाई पनि ५१% भन्दा बढी महिलाहरूको मुक्तीको बिषयले किन सताएन होला ? किन सोच्न आएन होला ? पार्टीको के.स मा पनि निम्न सहभागिता बाहेक ३३% पनि पुग्न गार्हो देखियो । २१ औं शताब्दीको बिश्वमा ३३% मा अटाउन नसकेका र पार्टीमा आवाज उठाउन नसकेका र बोल्न मन नगरेका महिलाहरू बिश्व महिला मुक्तीको बिषयमा कसरी लड्ने हिम्मत गर्नुहोला ? आमाको नामबाट नागरिकताको बारेमा कसरी बोल्नुहोला ? महिला आन्दोलन दासता तिर किन ढल्किदै छ ? यो बढो गंभीर कुरा हो ।
सहि र बैज्ञानिक संगठन प्रणाली नहुने कुराले सबैको अस्तित्व सहितको सहभागितालाई अटाउन सक्दैन ।एकाएक सबै मिलाउने नाटकको पर्पंन्च बाहेक नेतृत्वले अरू गर्न सक्दैन । बिचारमा शून्य,गुटगत कार्य बिभाजनमा मात्र केन्द्रित पार्टीमा यो भन्दा फरक आशा गरि निरासा हुने कुरै छैन । ५१% भन्दा बढि महिलाको मुक्तीको प्रश्नलाई नेकपाले कसरी हेरेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । सिङगो पार्टी संगसँगै यो प्रश्नको जवाफ,पद पाउने महिला बाहेक पदविहिन महिलाहरूको मात्र पनि होईन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको जनवर्गीय संगठनको निर्णय पार्टीको नेताहरुले गर्ने परिपाटीको उदय सँगै हरेक जनवर्गीय संगठन चिडिया खान जस्तो बनेका छन । बाहिर निस्कने चेष्टा गरेका उनिहरू मालीकको अनुकूलतामा बाहिरी बाताबरण हेर्न मात्र पाउँछन ।थुनेर राखेको आफु भन्दा बलियो भएको कारण बाहिर निस्किएपछि आफैलाई खान्छ भन्ने डरले शाहुले जालीबाट हेर्न दिने बाहेक बाहिर कहिले निकाल्दैन ।
यहाँ महिलालाई अधिकार दियो भने आफैलाई खतरा हुन्छ दिन हुन्न भन्ने पनि धेरै छन । अर्को तिर महिलाहरू चुपचाप सहिदिन्छन । किनकी ति महिलाहरू पनि कुनै न कुनै गुटको सेटिङमा छन । जहाँ केहि बोल्यो कि अलिकति भएको पद पनि खुस्किने खतरा देख्छन । स्बन्तन्त्र भएर बहस गर्ने महिलाहरू कमि हुदैगईरहेको ।७७ मा ३ स्थान पाएपछि बोल्ने भन्दा बधाई थाप्ने र खुशी हुने भएका छन । यस्तै बनेको छ डबल नेकपामा भर्खरै सम्पन्न ज़िम्मेवारी बाडफाडमा महिलाहरू स्थान ।महिला संगठन आफ्नो नेताको गुट चलाउन पर्न सक्ने अप्ठेरोलाई हेरेर कहिले सम्म उपभोगको बस्तु बन्दै चुप रहन्छन ? यो कुराको भन्डाफोर नगर्दा सम्म महिला मुक्तीको नारा संभव छैन ।
महिला मुक्तीको प्रश्न जब सम्म बर्गीय आन्दोलन र मुक्तीको बिषय बनेको छैन । अहिले सम्मको इतिहासमा सहभागिता मात्र छ । अनिवार्य न कुनै क्रान्तीमा बन्यो न त कुनै पार्टी संगठनमा । अनिवार्य नबन्दा सम्म हरेक पार्टीमा यस्तै डबल नेकपामा जस्तो हुन्छ ।त्यसैले हामीले अस्तित्व सहितको बहस र कार्यदिशा बनाउदै बैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलन छेडन अनिवार्य छ । जुन महिला आन्दोलन बर्गीय आन्दोलन सँगै मुक्तीको आन्दोलन हुनेछ ।
लेखक सुवेदी पुर्व मा‌ओबादी निकट अनेरास्वव्यू क्रान्तिकारीकाे सविच परित्याग गरि 'वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल'मा आवद्ध छिन् । याे उनकाे निजी विचार हाे ।
मगलवार, बैशाख १०, २०७६, ०१:०४:००